Harmee Gaaddisaa Hirphasaa: 'Biyyaaf ta'a otoo jennuu biyyoo ta'e' - BBC News Afaan Oromoo
Harmee Gaaddisaa Hirphasaa: 'Biyyaaf ta'a otoo jennuu biyyoo ta'e'
Image copyright Taye Hirphasa
Goodayyaa suuraa Suura Gaaddisaa Hirphasaa maatii isaa biraa arganne
Manni hidhaa Maakalaawii jedhamuufi dararaan guddaa hidhamtoota irratti gahaa ture dhihoo muuziyamii ta'e banameera. Hidhamtoota mana hidhaa kana keessatti lubbuu dhaban keessaa tokko immoo Gaaddisaa Hirphasaadha.
Barreeffamni 'Anamoo himattoota kootu yakkamtoota?'' jedhu dhaaba (keenyan) mana hidhaa Maakalaawii gubbaatti wayita daawwannaaf baname argame qalbii namoota hedduu hawwateera.
Barataa qaroo kan ture Gaaddisaan bara 1998 A.L.I tti du'aan darbuus, barreeffama Afaan Amaaraatiin maqaan isaas jalatti barreeffame miidiyaa hawaasummaa irratti haasa'un haala du'asaati yaadatan.
Dhimma kana ilaalchisuun haadha fi obboleessa angafaa isaa BBC'n akkamitti akka lubbuu dhabe iyyaafateera.
Obboleessi Gaaddisaa angafti Taayyee Hirphasaa sababa inni ittin qabamee yoo dubbatu mormii barattoota qindeessitee jedhamuun akka ta'e hima.
Maraammartoo 'Maa'ikalaawii' mootummoota sadanii
Hiriirri mormi barattootaas Finfinneetti bahamee ture. Wayita sanatti mormii barattoota qabbaneessuuf barattoota 300 ol Yuunivarsitiin Finfinneeti ari'ataman keessaa Gaaddisaan barataa tokko ture.
Komii hidhamtoonni duraanii waa'ee wal'aansa dhabu irratti himan
Wayita hidhaa turetti yeroo 3'f deddeebi'ee gaafachuu kan dubbatu Taayyeen, iddoo cinqii fi rakkisaadha jedhee Gaaddisaan natti himaa turee jedhe.
Boodarra garuu lubbuu kan dhabe miidhama mana hidhatti irra qaqqabeen yaalii otoo hin argatiin turuusaatin ta'u dubbata.
Kutaa dukkanaa lafa jalatti dararamuun hidhamaa turee, miidhama irra qaqqabeef yaalii dhabe, qaamni isaa guutuun laamsha'e, Sombii fi kaleen isaas miidhameera erga of dadhabee mana yaalaa geessan jechuun hima.
Image copyright Taayyee Hirphasaa
Goodayyaa suuraa Mana hidhaa Maa'ikalawwwitti barreeffama dhaaba manarratti argame
Mana hidhaa Maakalawii fi 'Alam- Baqqaa' iddoo jedhamee waamamutti A.L.I ji'a Adolessaa bara 1996 hamma bara 1998 lubbuun isaa darbutti mana hidhaa keessa ture.
Wayita lubbuu isaa dabartu akka bira ture kan dubbatu Taayyeen, miidhaan qaamasaarra mul'atu hin turre keessa qaama isaatu fayyaa hin qabu qaamni isaa guutuun hin hojjatu ture jedha.
Ragaa mana yaalaas gaafannee Nimooniyaa jedhanitu callisan yeroo sanatti kan jedhu obboleessi dhukkubsatee otoo hin taane reebamee miidhame du'e jechuun hima.
Obbo Taayyee Danda'aan Maakalaawiiti bahan
Dhimmisaa akka ilaalamuuf Mana murtiitti himadheen garuu dhukkubsateetu du'ee jedhanii galmeesaa cufani jedhe. Mootummaan harka keessaa qaba ture dhimmisaa akka ilaalamu hin barbaadan ture jechuun dubbata obboleessi hangafti dubbisne.
Haqa dhabuun himannaan isaa akka cufame kan dubbatu Taayyeen dhimma Gaaddisaa Mana Murtii Lidataatti deddeebi'e hordofaa akka ture dubbata.
Ragaan mana yaala dhukkubsateetu du'e jedha kana caala deemu hin dandeenyu jedhanii cufani jedhe.
'Ragaan yeroo sana ture qoratamuu qaba, namoonni yakka kana raawwatan lubbuun jiru, namni yakkaa lubbuu namarratti raawwate gaafatamuu qabaas,' jedha.
Haati Gaaddisaa Aadde Jaalalii Diroo 'miidhaa mana hidhaatti irraa qaqqabeen lubbuu dhabus gumaan isaallee hin baanee akkanumatti achiin hafee,' jedhan.
Hidhamuusaallee jalqabarratti akka hin dhageenye kan dubbatan Aadde Jaalaliin ''yeroo 3 mana hidhaa Qaalliittii fi Maakalaawiitti gaafadhe gara qe'eetti deebi'e, sana booda du'aasaa naaf fidanii,'' jedhani.
''Biyyaaf ta'a otoo jedhamee eegamuu biyyee ta'e'' jedhan.
6 Fuulbana 2019
Hiriyoonni koo mana hidhaatti hafuun gammachuu koo na jalaa hir'ise - Lalisee Baahiruu
16 Elba 2018